ရုံးတွင်းအင်္ဂလိပ်စကား (၇) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on February 18, 2014 at 12:14 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အလွန်နောက်ကျခြင်း very late
မိမိနောက်ကျတော့မည်ကိုကြိုတင်သိထားလျှင်၊ သို့မဟုတ် ၅ မိနစ်များစွာပိုနောက်ကျတော့မည်ဆိုလျှင် မန်နေဂျာထံကြိုတင်အကြောင်းကြားရှင်းပြထားသင့်သည်။ သူတို့ယဉ်ကျေးမှုတွင် မိမိထက်အကြီးအကဲအား နာမည်တပ်ခေါ်သည်မှာမထူးဆန်းသော်လည်း မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆီလျော်အောင်ပြောကြားရမည်ကိုသတိပြုပါ။
"Hi Barbara, I'm going to be 30 minutes late today. My car is having trouble this morning, so I arranged foraride withafriend."
ဟိုင်းဘာဘရာ။ ကျွန်တော်ဒီနေ့ နာရီဝက်လောက်နောက်ကျမယ်နော်။ ကျွန်တော့ကားဒီမနက်ပြဿနာရှာနေလို့။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကားနဲ့လိုက်လာခဲ့ရတယ်။
"Hey Jack, I'm runningalittle late today. I just got out of my dentist appointment and it was longer than I expected."
ဟေးဂျက်။ ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့နည်းနည်းနောက်ကျနေတယ်။ ကျွန်တော်သွားဆရာဝန်နဲ့ ချိန်းထားတာ အခုမှပြီးလို့ထွက်လာတယ်။ ထင်ထားတာထက်နည်းနည်းပိုကြာသွားတယ်။
"Mark? This is Pat. I'm stuck in traffic. I think there is an accident that is holding up traffic. I'm going to bealittle late."
မာ့က်လား။ ပက်တ် ပါ။ တို့ယာဉ်ကြောထဲပိတ်မိနေလို့။ ရှေ့မှာ ယဉ်တိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ထားလို့ ကားတွေပိတ်နေတာထင်တယ်။ နည်းနည်းနောက်ကျမယ်နော်။
တစ်ခါတစ်လေမှာ နောက်ကျနေမှဖုန်းလှမ်းဆက်တာထက် တစ်ရက်ကြိုတင်ပြောထားခြင်းဖြင့် အချိန်မီရောက်ရန်သောကရောက်စရာမလိုတော့ပေ။ ဥပမာ ဆရာဝန်နှင့်ချိန်းထားသည်ဆိုလျှင် ၄င်းမတိုင်မီတစ်ရက်လောက်ကကြိုပြောထားခြင်းမျိုးသည်ပိုအဆင်ပြေနိုင်သည်။
"I haveadoctor's appointment tomorrow morning. Remember I told you earlier this week? I'll come in right after my appointment."
မနက်ဖြန်မနက် ဆရာဝန်နဲ့ချိန်းထားတာရှိတယ်။ ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်အစလောက်တုန်းကပြောထားတယ်လေမှတ်မိတယ်မဟုတ်လား။ ပြီးထားနဲ့ချက်ချင်းလာခဲ့ပါမယ်။
"My daughter has been sick, so I'm going to take her to see the doctor tomorrow morning. Is it ok if I'malittle late? My appointment is at seven in the morning, so I'll only be an hour late."
ကျွန်မသမီးလေးဖျားနေလို့ သူ့ကိုမနက်ဖြန်ဆရာဝန်ဆီသွားပြမလို့။ နည်းနည်းနောက်ကျရင်ရတယ်မဟုတ်လား။ ကျွန်မအလှည့်က မနက်ခုနှစ်နာရီမှဆိုတော့ တစ်နာရီလောက်နောက်ကျမယ်။
"I have to take my parents to the airport tomorrow. I shouldn't be too late, but wanted to tell you ahead of time."
မနက်ဖြန် ကျွန်တော့်မိဘတွေကို လေဆိပ်လိုက်ပို့ပေးရမှာမလို့။ သိပ်အများကြီးနောက်မကျပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ခင်ဗျားကိုကြိုပြောထားချင်လို့။
အလုပ်မှစောစောပြန်ခြင်း Leaving Work Early
အလုပ်မှစောစောပြန်ခြင်းက အလုပ်နောက်ကျခြင်းထက်တော့ နည်းနည်းရှင်းပြဖို့အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။ ဆင်ခြေတစ်ခုတော့ကြိုတွေးထားဖို့လိုမည်။ အချိန်းအချက်တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အောက်ပါဆင်ခြေလေးများထဲက အသုံးတည့်တာလေးများယူသုံးနိုင်ပါသည်။
"I have to pick up my wife at the airport tomorrow. Is it ok if I leave at three?"
တုပ်ကွေးမိလို့ဖျားချင်နေတယ်နဲ့တူတယ်။ ဒါလေးပျောက်သွားနောင် နည်းနည်းအနားယူလိုက်ချင်တယ်။ ဒီနေ့စောစောပြန်လို့ရမလား။
ဖျားနာနေ့ Sick day
အောက်ပါအပြောစကားလေးများကတော့ ဖျားနာ၍အလုပ်မသွားနိုင်သည့်အခါခွင့်တိုင်ကြား ပုံလေးများဖြစ်ပါတယ်။
မာသာလား။ ဂျက်ပါ။ ကျွန်တော်ဖျားနေလို့ ဒီနေ့တော့မလာနိုင်တော့ဘူး။
ဟိုင်းမေရီ။ ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ ဖျားနာခွင့် ယူရလိမ့်မယ်။ အခုနေမကောင်းဘူး။
ဟိုင်း ဆမ်။ ဂျက်စီကာပါ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအရေးပေါ်ကိစ္စလေးပေါ်လာလို့။ ဒီနေ့တော့မလာနိုင်တော့ဘူး။
မာ့ခ်လား။ ဂျွန်ပါ။ ဒီမနက် ကျွန်တော့်အဖေအရေးပေါ်ဆေးရုံတင်ရလို့။ ဘာဖြစ်တာလဲမသေချာသေးဘူး။ ဒီနေ့တော့လာနိုင်မယ်မထင်တော့ဘူး။ နောက်မှ အသေးစိတ်ပြောပြမယ်။
ဗြိတိသျှကောင်စီ ၏ Social Enterprise Consultant အစီအစဉ် အတွက် လျှောက်လွှာများ စတင်ခေါ်ယူနေ
ဗြိတိသျှကောင်စီသည် မိတ်ဖက်ဖြစ်သူ Challenges World Wide အဖွဲ့အစည်းနှင့် တွဲဖက်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်သော ပညာရေးနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်တစ်ရပ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် Social Enterprise Consultant အစီအစဉ် အတွက် လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူလျက်ရှိပါသည်။
ဗြိတိသျှကောင်စီ၏ Social Enterprise Consultant အစီအစဉ် သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုများကိုအသုံးချ၍ မိမိပတ်ဝန်းကျင် လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းအား အပြုသဘောဆောင်သည့် အပြောင်းအလဲများ ဖန်တီးလိုစိတ်ပြင်းပြသူများ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြား လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ရင်ဆိုင်နေရသော ခက်ခဲသည့် စိန်ခေါ်မှုများအား ကျော်လွှားနိုင်မည့် အကျိုးရှိသည့် ဖြေရှင်းချက်များရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်မြှုပ်လုပ်ကိုင်ရန် ဆန္ဒရှိသူများ အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း ဗြိတိသျှကောင်စီမှ အစီအစဉ်တာဝန်ရှိသူ Tristan Ace မှပြောပါသည်။
Social Enterprise Consultant အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန်ရွေးချယ်ခံရပါက နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Chartered Management Institute (UK) ၏ သင်ကြားရေးအစီအစဉ် တစ်ရပ်ဖြစ်သည့် လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီစေရန် စီမံထားသည့် စီးပွားရေးအတိုင်အပင်ခံ သဟဇာတ သင်ယူရေးအစီအစဉ် (business consultant blended learning programme) တွင် ပါဝင်လေ့လာခွင့်ရှိမည် ဖြစ်ပြီး မိမိ၏တိုးတက်မှုအပေါ်မူတည်၍ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု စီးပွားရေးအတိုင်အပင်ခံ အရည်အချင်းအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (The Certificate in Consulting Essentials) ကိုလည်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ NGO များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုဖန်တီးနိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းပေါင်းများစွာအား အတိုင်ပင်ခံအကြံပေးလုပ်ငန်း ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည့် ('On the job’ training) လုပ်ငန်းခွင်တွင်လည်း လက်တွေ့သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ အစီအစဉ်တွင် မိမိလက်ရှိလုပ်ဆောင်နေသော လုပ်ငန်းခွင်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေမည့် တစ်ဦးချင်း၏ လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီစေရန် ပြုပြင်စီမံထားသည့် သင်ကြားမှုပုံစံများဖြင့် ၀ါရင့် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံများမှ လမ်းညွှန် ပို့ချမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန် - http://www.myanmar-network.net/forum/topics/social-enterprise-consu...